* UQOQOSHO NOKUXHAPHAZA!
Ezinye izaphuli-mthetho zizenza njengabasebenzi abathumela kwelinye ilizwe kwaye zithumela ii-XportCARD's ezibiweyo yi-DHL ukwenza ubuqhetseba. Siqokelela ulwazi ukumisa ezi zaphuli-mthetho:
- Idilesi ye-imeyile efanelekileyo yeXportCARDs yile: card@exportunity.net. Ukuba nabani na unxibelelana nawe wenza idilesi eyahlukileyo ye-imeyile ngokubhekisele kwiXportCARDs kusenokwenzeka ukuba bubuxoki.
-Iqela elithunyelwa ngaphandle kunye neqela leXportCARD ababoneleli ngemalimboleko okanye iLotto.
-Iikhowudi ze-XportCARD Pin zisimahla . Asisoze sikucele ukuba uhlawule ikhowudi yakho yeXportCARD 'yePIN.
Iikhowudi zepini zeXportCARD zihlala zitywinwa kunye nekhadi kumnini osemthethweni kwimvulophu. Iqela leXportCARD alazi Iikhowudi zePIN. Ukuba awunayo "i-PIN" yakho yeXportCARD, kusenokwenzeka ukuba unekhadi elibiweyo. Ukuba unayo iXportCARD ephethwe nguwe ngokungekho mthethweni, wophula imithetho ye-Central Bank of West African States (BCEAO) kwaye kufuneka ubuyisele amakhadi kwangoko e-UBA (United Bank ye-Afrika, Idilesi ikweli khadi) .
-IXportCARD ixabisa kuphela i-USD $ 20.
-I-XportCARD ayinakubamba ngaphezulu kwe- $ 4000 USD ngaxeshanye, ngokommiselo olawulayo weBhanki eNkulu, kwaye ithengiswa kuphela Ukunikezelwa kwe-ID ebonakalayo kumasebe ethu eBenin, okanye ngokusebenzisa ii-rayOn zokusebenza.
- UNGANGQANGELWA! Asikhe sisebenzise i-Western Union / i-MoneyGram okanye ezinye izisombululo zokudlulisa imali. Yonke intengiso yethu ekwi-Intanethi iyenzeka nangona iiNkqubo zethu ze- "rayOn" zikhuselekile.
-Ukuba nabani na ucela ukuba ubhatale i-PIN, NGABO NGABABI BANGOQHOPHISO, SUKUPHENDULE KWIMIYALEZO YABO, okanye ungangumphathi wokuziphatha kakubi.
Ukuba ulixhoba lezi zaphuli-mthetho, unganceda ukubamisa ngokwabelana ngebali lakho, usithumelele i-imeyile ku-card@exportunity.net
Iqela elithunyelwa ngaphandle limiselwe kunye nabasemagunyeni abanyanzelisa ukuthotyelwa komthetho ukulandela nokuchonga bonke abantu kunye / okanye amaqela asebenzisa iXportCARDs kwimisebenzi engekho mthethweni.
Funda ngakumbi malunga neXportCARDs apha: https://www.exportunity.com/xportcard
YONKE MALUNGA NE-XPORTCARDS